Nyanzvi 15kva-500kva Yakavhurika / Yakanyarara Yakasikwa Gesi jenareta Inoisa Mugadziri uye Fekitori Zvakananga | Wako Akafanana
Iyo gasi gasi jenareta unit ndeye kuvesa gasi muchina unofuridzirwa negasi yeakakwira calorific kukosha senge gasi rechisikigo Pahwaro hweiyo isiri-yepamusoro-soro modhi, iyo yekuwedzeredza system uye iyo yepakati kutonhora system inowedzerwa. Iyo inotonhora sisitimu inotora nzira yekuparadzanisa yakakwira uye yakadzika tembiricha macircuit. Iyo yepamusoro tembiricha kutenderera inotonhodza humbwende, muviri, humburumbira musoro uye zvimwe zvepamusoro tembiricha zvinhu, uye yakaderera tembiricha kutenderera inotonhodza iyo gasi, mweya uye mafuta anotonhorera mushure mekuwedzeredza.
Gasi, mafuta uye chinotonhorera:
Pamberi pekushandisa kweinjini gasi jenareta injini, zvakakodzera magadzirirwo egasi gasi, oiri uye inotonhorera inofanirwa kusarudzwa zvinoenderana nenzvimbo chaiyo uye mamiriro ekushandisa.Kusarudzwa kwakakodzera kana kwete kune pesvedzero huru pane yekuita uye hupenyu hwehupenyu hweinjini ye iyo gasi gasi jenareta yakaiswa.
1 Zvinodiwa zvekushandisa gasi mune chaiwo gasi inogadzira seti:
Mafuta einjini yegasi anonyanya gasi, asi anogona zvakare kushandisa gasi rinopisa senge oiri munda inosanganisirwa gasi, yakasanganiswa peturu peturu uye gasi remethane. Iyo gasi inoshandiswa ichave yakashumwa kuti iite isina mahara mvura, oiri isina kuchena uye mafuta akareruka, ine yakaderera calorific kukosha isingasvike pane 31.4 mJ / m3, yakazara sarufa yezvinhu isingasapfuure 480mg / m3, uye hydrogen sulfide zvemukati yekusapfuura 20mg / m3 Mukuwedzera, iyo gasi yekufambisa yekumanikidza iri mukati meMAP renji re0.08-0.30.
2.Oiri inoshandiswa mune yakasikwa gasi jenareta seti:
Oiri inoshandiswa kukodza zvikamu zvinofamba zveinjini yegasi uye kutonhora uye kubvisa kupisa, kubvisa tsvina uye kudzivirira ngura kubva kune idzi nzvimbo dzinofamba. Hunhu hwayo haingokanganisa mashandiro uye hupenyu hwehupenyu hweinjini yegasi, asi zvakare inokanganisa hupenyu hwebasa remafuta.Naizvozvo, mafuta akakodzera anofanirwa kusarudzwa zvinoenderana neyekushandisa nharaunda tembiricha yeinjini yegasi yeiyo gasi jenareta. engi gasi engini, 15W40CD kana 15W40CC, nezvimwe zvinoshandiswa sezvinobvira
3.Masikirwo emagetsi emagetsi anoshandisa inotonhorera:
Iyo inotonhorera inoshandiswa kutonhodza yakanangana neinjini kune anotonhodza masisitimu kazhinji ANOSHANDISA mvura yakachena yakachena, mvura inonaya kana kujekesa mvura yemurwizi. Kana iyo gasi gasi injini ichishandiswa pasi pemamiriro ezvinhu enharaunda asingasvike 0 degree, inofanirwa kuve yakanyatsodzivirira iyo inotonhorera kuita chando Inogona kushandiswa zvinoenderana nekupisa kwenzvimbo yakakodzera yechando yeantifreeze kana mukutanga usati wazadza mvura inopisa, asi inofanirwa pakarepo mushure mekumira kwemvura.
Pashure: Chinotakurika / tirera Rudzi Diesel jenareta Set
Zvadaro: Gungwa Mvura Desalination jenareta Set
Muenzaniso Simba Guru Kakawanda Kutonhora nzira Kudya kwemhepo Injini Muenzaniso Injini brand
YDNG-12Y 12 15 50/60 kutonhora kwemvura Natural chishuwo YD4M1D (480) YANGDONG
YDNG-20Y 20 25 50/60 kutonhora kwemvura inter-kutonhora YD4M3D (480)
YDNG-15Y 15 18.75 50/60 kutonhora kwemvura Natural chishuwo YD4B1D (490)
YDNG-30Y 30 37.5 50/60 kutonhora kwemvura inter-kutonhora YD4B3D (490)
YDNG-30Y 30 37.5 50/60 kutonhora kwemvura Natural chishuwo YD4102D
YDNG-30L 30 37.5 50/60 kutonhora kwemvura Natural chishuwo YDN1004 RUDO
YDNG-40L 40 50 50/60 kutonhora kwemvura Natural chishuwo YDN1006
YDNG-50L 50 62.5 50/60 kutonhora kwemvura Natural chishuwo YDN1006
YDNG-60L 60 75 50/60 kutonhora kwemvura inter-kutonhora YDN1006ZD
YDNG-80L 80 100 50/60 kutonhora kwemvura inter-kutonhora YDN1006ZD
YDNG-80W 80 100 50/60 kutonhora kwemvura Natural chishuwo YDN615D STYER
YDNG-100W 100 125 50/60 kutonhora kwemvura inter-kutonhora YDN615AZLD
YDNG-120W 120 150 50/60 kutonhora kwemvura inter-kutonhora YDN615AZLD
YDNG-100W 100 125 50/60 kutonhora kwemvura Natural chishuwo YDN618D
YDNG-150W 150 187.5 50/60 kutonhora kwemvura inter-kutonhora YDN618AZLD
YDNG-200W 200 250 50/60 kutonhora kwemvura inter-kutonhora YDN618AZLD
YDNG-250W 250 312.5 50/60 kutonhora kwemvura inter-kutonhora YDNWP13
YDNV-150 150 187.5 50/60 kutonhora kwemvura inter-kutonhora V6 VMAN
YDNV-200 200 250 50/60 kutonhora kwemvura inter-kutonhora V8
YDNV-300 300 375 50/60 kutonhora kwemvura inter-kutonhora V12
YDNV-400 400 500 50/60 kutonhora kwemvura inter-kutonhora V16
Chinzvimbo chekugovera: Injini yemagetsi gasi (unit ine tangi remvura), Alternator, base, control module, kuvesa system, gasi rinodzora system, kumanikidza kudzora vharuvhu, inosunga murazvo, geji yekumanikidza, muffler uye zvisina kujairika bhokisi rekushandisa.
1, Iyo gasi haina mvura yemahara kana zvimwe zvinhu zvemahara (saizi yekusviba ichave isingasvike pamamita mashanu).
2, Methane zvemukati hazvisi pasi pe 95%, gasi calorific kukosha biogas haisi pasi pe550 / 600kcal / m³, gasi rechisikigo calorific kukosha ≥850 / 600kcal / m³, kana ikashandisa yakaderera calorific kukosha gasi （calorific kukosha <850 / 600kcal / m³） ， simba reyuniti rakadzikira zvishoma.
3, Hydrogen sulphide zvemukati mune gasi <200mg / m³, zvakawandisa sarufa zvemukati zvinoda desulfurization.
4, Gasi inlet kumanikidza 3-100KPa, Booster fan inodiwa isingasviki, uye vharuvhu yekuyamura inodikanwa inopfuura 100Kpa
5、1 gore garandi kana maawa 150/600 ekushanda kwese, chero ipi inotanga kutanga
6, Gasi yekushandisa: 0.33 m3 / KWH yegasi rechisikigo